အီလက်ထရောနစ် အသုံးအဆောင်တွေကို မစွဲလမ်းစေဖို့ ကလေးငယ်တွေကို သင်ကြားပေးရမယ့် အချက် (၈) ချက် | Myanmar Mobile App
Home Trending Gadget အီလက်ထရောနစ် အသုံးအဆောင်တွေကို မစွဲလမ်းစေဖို့ ကလေးငယ်တွေကို သင်ကြားပေးရမယ့် အချက် (၈) ချက်
ယနေ့ခေတ်ကလေးငယ်များဟာ ကွန်ပျူတာများ၊ စမတ်ဖုန်းများ၊ Tablet များနှင့်ငယ်စဉ်ကတည်းကပင် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်လာကြပါတယ်။ ဒီအရေးကိစ္စဟာ မိဘများ၊ ကလေးအထူးကုများ၊ နှင့် အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်း အလွန်အကျွံအသုံးပြုခြင်း၏ နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများကို ဟောပြောနေသည့် စိတ်ပညာရှင်များအတွက် စဉ်းစားစရာကိစ္စဖြစ်လာပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ကလေးများကို ဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲ။
နောက်ဖော်ပြပါအချက်၈ချက်ကတော့ သင်ရောသင့်ကလေးအတွက်ပါအထောက်အကူဖြစ်စေမည့် ဒီဂျစ်တယ်အသုံးအဆောင်များနှင့် သင့်တင့်မျှတစွာအသုံးပြုနိုင်ရေးနည်းလမ်း ၈သွယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
၈. သင့်ကလေးအတွက် အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းအသုံးပြုချိန်ကိုသတ်မှတ်ထားပါ။
ကလေးတစ်ဦး ရုပ်မြင်သံကြားကြည့်ရှုသည့် ၊ ဒီဂျစ်တယ်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတစ်ခုအသုံးပြုသည့် အချိန်ပမာဏဟာ သူ့ရဲ့အသက်အရွယ်အပေါ်မူတည်ပါတယ်။ အမေရိကန်ကလေးအထူးကုအကယ်ဒမီမှ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း တိုက်တွန်းထားကြပါတယ်။
တီဗီအပါအ၀င်မည်သည့် အီလက်ထရောနစ်အသုံးအဆောင်ကိုမှမသုံးပါစေနဲ့။ အဘိုးအဘွား၊ ဆွေမျိုးများနှင့် တွေ့ဆုံနိုင်ရန် တစ်ခါတလေ Skype အသုံးပြုခြင်းမျိုးလောက်သာပြုလုပ်ပါ။
အသက် ၂နှစ်မှ ၅နှစ်အရွယ်
တစ်နေ့အတွင်း စမတ်ဖုန်း၊ တီဗီ၊ ကွန်ပျူတာအသုံးပြုချိန် ၁နာရီထက်မပိုပါစေနဲ့။
ကျွမ်းကျင်သူများကတော့ တစ်နေ့လျင်၂နာရီသာ အီလက်ထရောနစ်အသုံးအဆောင်များကို အသုံးပြုစေပါတယ်။ ထိုသို့အသုံးပြုခြင်းများကြောင့် အိပ်ချိန်၊ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားပြုလုပ်ချိန် နှင့်အ အခြားသောသင့်ကလေး၏ ကျန်းမာရေးဖွံ့ဖြိုးစေမည့် လုပ်ငန်းဆောင်တာပြုလုပ်ချိန်များကို မလျော့နည်းစေပါနှင့်
၇. မပိတ်ပင်ပါနှင့် – အခြားသောရွေးချယ်စရာအကြံပြုပါ။
“တစ်ခြားတစ်ခုခုသွားလုပ်”ဟုတိုက်ရိုက်ပြောဆိုကာ စမတ်ဖုန်း၊ ကွန်ပျူတာများကို ဆွဲယူပစ်လိုက်ခြင်းဟာ ပဋိပက္ခတစ်ခုဖြစ်စေရန် ဦးတည်သွားစေပါတယ်။ ထိုသို့မဟုတ်ဘဲ အသက်အရွယ်၊ အကျင့်စရိုက်အပေါ်မူတည်၍ စိတ်ဝင်စားဖွယ် အစားထိုးနည်းလမ်းများဖြစ်သည့် အားကစားပြုလုပ်ခြင်း၊ တောင်တက်ခြင်း၊ ပန်းချီရေးဆွဲခြင်း၊ စာဖတ်ခြင်း၊ ဖခင်ဖြစ်သူနှင့်ငါးမျှားခြင်းများကို ရွေးချယ်ပြုလုပ်ခွင့်ပေးပါ။
ကလေးငယ်များဟာ သူတို့ရဲ့မိဘတွေရဲ့အပြုအမူတွေကို အတုခိုးလေ့လာပြုလုပ်လေ့ရှိပါတယ်။ မိခင်မှ စာဖတ်ပြနေလျင် အဆိုပါကလေးငယ်စာအုပ်ဖတ်ချင်လာနိုင်သည့်အလေ့အကျင့် ဖြစ်လာနိုင်ပြီး မိခင်မှတစ်ချိန်လုံးဖုန်းသုံးပြနေခြင်းထက် ပိုမိုအထောက်အကူဖြစ်စေမှာပါ။
သင်အီလက်ထရောနစ်အသုံးအဆောင်အပေါ် သုံးစွဲမှုများကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ကြည့်ပါ။ အဲဒီအတွက် သင်ဘယ်လောက်ထိအချိန်ကုန်ဆုံးထားသလဲ။ သင့်ရဲ့ e-mail တွေ၊ Update တွေ၊ သတင်းတွေကို ဘယ်လိုစစ်ကြည့်လေ့ရှိသလဲ။ အင်တာနက်နှင့် ဒီဂျစ်တယ်စက်ပစ္စည်းများမှကင်းလွတ်သည့်နေ့ရက် ဘယ်လောက်ရှိသလဲ။
၅.နည်းမှန်လမ်းမှန်ဖြင့် ဒီဂျစ်တယ်ကမ္ဘာကြီးသို့ လမ်းပြပေးပါ။
အင်တာနက်ဆိုသည်မှာ ဖျော်ဖြေရေးသက်သက်မဟုတ်ဘဲ သတင်းအချက်အလက်များ၊ ဗဟုသုတများ စုဝေးနေသည့်အသိုက်အမြုံကြီးဖြစ်ကြောင်း သင့်ကလေးများကို ညွှန်ကြားပြသပေးပါ။ သင့်ကလေး၏ စူးစမ်းလိုစိတ်၊ မေးခွန်းမေးလိုစိတ်များကို အားပေးပါ။ သင့်အတွေ့အကြုံများကို မျှဝေအဖြေပေးနိုင်ရန် အသင့်ပြင်ထားပါ။
၄. မိမိရင်သွေးစိတ်ဝင်စားနေသည့်အကြောင်းအရာများကို သတိထားစောင့်ကြည့်ပါ။
အသက်၉နှစ်နှင့်အထက်ရောက်သည်အထိ ကလေးတစ်ယောက်၏ အင်တာနက်သုံးစွဲခွင့်ကို မိဘများမှ ထိန်းညှိပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ကလေးငယ်ကိုဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးလာစေမည့် ၀က်ဆိုက်များ၊ ပညာရေးအစီအစဉ်များကို ဦးစားပေးထားတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။
သင့်အနေနဲ့ ၀က်ဆိုက်များသို့သင့်ကလေးအသုံးပြုခြင်းကို ကန့်သတ်နိုင်စေမည့် “Parent Control” လုပ်ဆောင်ချက်ကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာသင့်ပါတယ်။
၃. အင်တာနက်နှင့် ဒီဂျစ်တယ်စက်ပစ္စည်းများကင်းမဲ့ဇုန်သတ်မှတ်ပေးထားပါ။
အင်တာနက်နှင့် ဒီဂျစ်တယ်စက်ပစ္စည်းများ အမြဲတမ်းအသုံးမပြုရမည့် နေရာများ (ဥပမာ- အိပ်ခန်း၊ ကလေး၏အိပ်ခန်း) နှင့် အချိန်များ(မိသားစုထမင်းစားချိန်၊ ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်အချိန်ပေးချိန်) သတ်မှတ်ထားပါ။ သင့်ကလေးငယ်၏အခန်းထဲတွင် ကွန်ပျူတာမထားပါနှင့်။ အိပ်ခန်းထဲ၊ ထမင်းစားခန်းထဲသို့ ဖုန်းများ၊ Tablet များယူဆောင်မလာရန် နားလည်အောင်သင်ပြပေးပါ။ ကလေးအထူးကုဆရာဝန်များကတော့ အိပ်ချိန်မတိုင်မီ တစ်နာရီအတွင်း ဒီဂျစ်တယ်စက်ပစ္စည်းများကိုအသုံးမပြုရန် ဆော်သြထားပါတယ်။
သင့်ကလေးငယ် အသက်၁၂နှစ်အရွယ်မရောက်သေးခင်အချိန်ထိ Social Media Network များကိုအသုံးမပြုစေတာပိုကောင်းပါတယ်။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်လူငယ်တစ်ယောက်အတွက်ကတော့ သူ့ကိုယ်သူနားလည်ဖို့ရန်နှင့် လူအများကြားမှာ လူရာဝင်ရန် လေ့လာရမည့်အချိန်ဖြစ်သောကြောင့် Social Media အသုံးပြုခြင်းဟာ အရေးပါသည့်အရာတစ်ခုလည်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
အရေးကြီးတာကတော့ အနီးနားတွေစောင့်ကြည့်ပေးနေပြီး အွန်လိုင်းလောက၏ သဘောသဘာဝများကို နားလည်သဘောပေါက်စေရန် ကူညီပေးရပါမည်။ သို့သော်လည်း သင့်ကလေး၏ Social Network ၏ Friend List တွင်သင်မပါဝင်ပါစေနဲ့။ အထူးသဖြင့်သင့်ကလေး၏ Post များ၊ ဓာတ်ပုံများအောက်တွင် Comment များရေးသားခြင်း လုံးဝမပြုလုပ်ပါနဲ့။ သင့်ကလေးတွင်လည်း ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ လွတ်လပ်ခွင့်ရှိတာကို အမှတ်ရထားပါ။
၁. အန္တရာယ်များနှင့်ပတ်သက်ပြီး သင့်ကလေးကိုသတိပေးပြသထားပါ။
သင့်ရဲ့ဦးဆောင်မှုအောက်တွင်မဟုတ်ဘဲ သင့်ကလေးအားအင်တာနက်အသုံးပြုခွင့် ပေးလိုက်ပြီဆိုပါက အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းမှ အန္တရာယ်များအကြောင်းကို သူသိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အောက်ပါအချက်များကို သေချာရှင်းပြပေးထားပါ။
Privacy Settings များကိုဘယ်လို၊ ဘာကြောင့်ပြင်ဆင်ထိန်းညှိရမလဲ
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များအား လူတိုင်းကိုသိခွင့်ပေးခြင်း၏ နောက်ဆက်တွဲအန္တရာယ်အကျိုးဆက်များ
အခြားသူများ၏ကိုယ်ပိုင်အရေးအသားများ၊ ဖန်တီးမှုများကို Download ရယူခြင်း
မိမိတို့အင်တာနက်ပေါ်တွင် တင်လိုက်သမျှအရာအားလုံးဟာ Public Domain သို့ဝင်ရောက်သွားမှာဖြစ်ပြီး အဲဒီမှာပဲ အမြဲတမ်းရှိနေမယ်ဆိုတာကို သင့်ကလေးအားပြောပြထားပါ။ အင်တာနက်ပေါ်တွင်တွေ့ရှိသမျှအရာအားလုံးကို ဂရုစိုက်သတိထားရပါမယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ပြဿနာတစ်ခုခုဖြစ်ပါက သင့်ဆီကိုမကြောက်မရွံ့စေဘဲ ချည်းကပ်အကူအညီတောင်းခံစေရန် အမြဲတမ်းလမ်းဖွင့်ထားပေးပါ။
ခေတ်သစ်နည်းပညာများဟာ အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပေမယ့် သင့်ကလေးငယ်များကို ထိုအရာများနှင့် လုံးဝခွဲထုတ်မထားပါနဲ့။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ခေတ်နည်းပညာများဟာ လေ့လာချင်စရာများစွာနှင့်ပြည့်နှက်နေသည့် ဗဟုသုတအရင်းအမြစ်တစ်ခုကြီးဖြစ်ပြီး တီထွင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းကို ထွန်းညှိပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ကလေးငယ်အတွက် ဒီပစ္စည်းလေးတွေကိုကြည့်လိုက်ပါဦး — Portable Movie Theater နှင့် “အမေ” ဟုပါဝင်သည့် LEGO iPad လက်ကိုင်လေးပါ။
Previous articleအဆ ၅၀၀၀ အထိ မြန်ဆန်နှုန်းမြင့်တက်လာစေမယ့် ကွင်တမ်ကွန်ပျူတာ
Next articleTelegram ဟာ ခရစ်ပတိုငွေကြေးစီးဆင်းမှု မှာ ဒေါ်လာ ၁.၂ဘီလျံ ကွိုင် နဲ့ ၀င်ရောက်ဖို့ စီစဉ်နေ